अस्पताल र प्रतिष्ठानकाे जुहारीले दाङवासीकाे अाशा निराशामा परिणत
दाङ । पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल र प्रा.डा. गोविन्द केसीको पहलमा सरकारले सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गर्‍यो ।
युवा वैज्ञानिक राेकाले बनाए अटाेमेटिक पम्प कन्ट्राेलर
दाङ । युवा वैज्ञानिक मार्सल रोकाले अटोमेटिक पम्प कन्ट्रोलर निर्माण गरेका छन् ।
दाङमा 'क' वर्गकाे एम्बुलेन्स सञ्चालनमा, डाक्टर र इमर्जेन्सी सेवासमेत हुने
दाङ । दाङमा पहिलो पटक डाक्टर र इमर्जेन्सी सेवासहितको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको छ । दाङको लमहीमा रहेको फ्लोरेन्स अस्पतालले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
दाङ पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा हुँदै
दाङ, पुस २१ । दाङलाई पुस २३ गते औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्ण खोपयुक्त जिल्लाका रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी भए दाङका कुन कार्यालयमा के रहन्छन् ?
दाङ, पुस २० । औपचारिक रुपमा पहिलो पटक नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले दाङ राजधानी हुने भनेपछि चर्चा रहेको दाङ प्रदेशको राजधानी हुने तयारीमा रहेको छ ।
उम्मेदवारहरुले अझै पनि खर्च विवरण बुझाएनन्
दाङ, पुस ११ । मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म एकजना उम्मेदवार बनेका नेताले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् ।
समानुपातिकमा एमालेलाई कांग्रेसले उछिन्यो
दाङ, मंसिर २७ । प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि दाङमा सामानुपातिक तर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार नेपाली काँग्रेस पहिलो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
यस्तै तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ भने चौथो स्थानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले कब्जा गरीरहेको समयमा दाङमा विवेकशील साझा पार्टीले पाचौँ स्थान सुरक्षित गरेको छ । छैठौँ स्थानमा राप्रपा रहेको छ भने सातौँ स्थानमा नेकपा माले रहेको मतले देखाएको छ ।
समानुपातिकतर्फ दाङमा एमाले अगाडि, काँग्रेस दोस्रो
दाङ, मंसिर २६ । प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि समानुपातिक तर्फको गनणा सुरु भएको छ ।
दाङमा चार हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने, संबेदशनील केन्द्रमा प्रहरी निरीक्षकले कमाण्ड गर्ने
घोराही, मंसिर २० । भोलि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि दाङमा ४ हजार एक सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचानल गरिने भएको छ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र सादा पोशकमा समेत सुरक्षाकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाइने भएको हो ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा होस भन्ने उदेश्यका साथ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त सुरक्षा टोली खटिएको उनको भनाई छ । निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न हुने भन्दै उनले ढुक्क भएर मतदान गर्नका लागि जान मतदातालाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
चुनावविरोधी ३२ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
दाङ, १९ मंसिर । दाङमा चुनावविरोधी कार्यमा संलग्न ३२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनीहरुलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विप्लव नेतृत्वका ३२ जना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
मंसिर २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनीधि र प्रदेशसभा सदस्य चुनावलाई विथोल्ने कार्यमा संलग्न भएका ३२ जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी एवं प्रबक्ता भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए । पक्राउ परेकालाई आवश्यक अनुसन्धान जारी राखेको प्रबक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको घोषणपत्र : दाङ जिल्लालाई गुइठामुक्तदेखि राजधानीसम्म
दाङ, मंसिर २ । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनीधी सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्बाचनका लागि दाङ काँग्रेसले घोषणा पत्र सार्बजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेस दाङले घोराहीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी घोषणा पत्र सार्बजनिक गरेको हो ।
घोषणपत्रमा जिल्लालाई गुइठामुक्त जिल्ला बनाउनेदेखि प्रदेश राजधानी बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
समृद्ध दाङ बनाउनका लागि राजधानी बनाउने, दिर्घकालिन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न दाङ र देउखुरी उपत्यकामा बृहत चक्रपथ निर्माण गर्ने, दाङ–देउखुरीको ब्यबस्थित विकास निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, परिणममुखी विकास योजनलाई प्राथमिकता दिने घोषणपत्रमा समाबेश गरिएको छ ।